Mpanamboatra sy mpamatsy birao maimaimpoana maimaim-poana ho an'ny orinasa PVC
4mm plastika plastika PVC
Ny tabilao maimaimpoana maimaim-poana amin'ny PVC dia karazana tabilao vita amin'ny busa vita amin'ny PVC. Araka ny fizotry ny famokarana, ny tabilao vita amin'ny foam vita amin'ny PVC dia azo zaraina amin'ny fantsom-bozaka manavom-bokatra sy vovoka maimaim-poana amin'ny PVC. Ny tabilao vita amin'ny foam vita amin'ny PVC dia fantatra koa amin'ny hoe Schaeffer board sy andI board. Ny firafitr'izy ireo dia ny PVC.
Tabilao vita amin'ny 3mm PVC
Raha ny teknolojia ankehitriny dia afaka manome takelaka misy vovoka 1-30mm PVC izahay. Anisan'ireny, ny tabilao vita amin'ny 3mm PVC dia famaritana malaza indrindra. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mampiasa azy amin'ny fanontana sy fanaovana takelaka fanaovana dokam-barotra.
UV pirinty foamboard 2mm
UV pirinty foamboard 2mm dia karazana takelam-bovoka maimaim-poana amin'ny PVC, ary an'ny PVC foam sheet daholo izy rehetra. Ny sombin-tsolika PVC dia azo zaraina ho solaitrabe satroka vita amin'ny PVC ary solaitra maimaim-poana amin'ny PVC araka ny fizotry ny famokarana.